Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2017
Ny tantaran'ny fetin'ny lainga na ny "poisson d'avril"
2017-03-28 @ 16:30 in Ankapobeny
Tsy dia mazava loatra ny nahatonga ity fety ity ka tombatombana avokoa ny zava-drehetra. Tombana iray no soratako etoana. Teo aloha, tany Eoropa, dia maro ireo tanandehibe nankalaza ny taombaovao ny 1 marsa na 25 marsa na 1 avrily. Tamin'ny taona 1564 no nanapahan'ny mpanjaka frantsay Charles IX fa manomboka io taona io dia 1 janoary indray no ankalazana ny taombaovao fa tsy andro hafa voatonona etsy ambony intsony. Nodidian'ny Papa Grégoire XIII hampiharina amin'ny tontolo kristiana rehetra izany tamin'ny taona 1582.
Maro no sahirana tamin'io fanovana andro taombaovao ka nanohy nankalaza ilay "taombaovao taloha". Tombana iray tao anatin'ny maro ihany io nolazaiko io... Fa raha mahamarika ianareo dia efa nanomboka niala tamin'ny vanim-potoana antenantenany i Eoropa ka niditra tamin'ny vanim-potoana maoderina.
Koa raha miverina eto Madagasikara aho dia lasan'eritreritra hoe... sao hiverina amin'ny vanim-potoana antenantenany isika ary hiala amin'ny vanim-potoana maoderina. Fa resaka tsy misy dikany izany ry zareo fa ankalazao ny fetinareo a! Mirary soa!
Lalana ankodahoda: Isahafa - Ambatoharanana - Imerimandroso